खल्तीबाट टिकटक भिडियो बनाए ५ हजार ! – Nepal Online Khabar
भाद्र ८, २०७८ मंगलबार 83
काठमाडौं : खल्ती डिजिटल वालेट ले खल्तीको १० प्रतिशत क्यासब्याक अफरमा सिर्जनात्मक टिकटक भिडिओ बनाई रू. ५ हजार जित्ने सकिने टिकटक च्यालेन्ज प्रतियोगिता सार्वजनिक गरेको छ।
खल्तीले टिकटक भिडिओ बनाउनेहरूका लागि लक्षित गर्दै उक्त प्रतियोगिता सार्वजनिक गरेको जनाएको छ।यस प्रतियोगिताको उत्कृष्ट ३ कलात्मक भिडिओहरुले रू. पाँच हजार नगद जित्ने सुनौलो अवसर प्राप्त गर्नेछन्।
यस च्यालेन्जमा प्रतिस्पर्धीले आफ्नो नम्बर रिचार्ज गर्दा पाएको १० प्रतिशत क्यासब्याकलाई रमाइलो ढंगमा भिडिओ मार्फत् देखाउन सक्नेछन्।
कम्पनीका अनुसार खल्ती आफैले आफ्नो टिकटकमा एउटा उदाहरण राखेको छ, जसमा पसलबाट रिचार्ज कार्ड खरिद गरी घर फर्कदा रिचार्ज कार्ड हराएको र उक्त अवस्थामा खल्ती बाट रिचार्ज गरी १० प्रतिशत क्यासब्याक पाएको सन्देश भिडिओ मार्फत दिएको छ।
१७ अगस्ट देखि ३० सम्म सञ्चालन हुने यस प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनका लागि सहभागीले भिडिओ बनाउनुको साथै खल्तीको आधिकारिक टिकटक र इन्स्टाग्राम फलो पनि गर्नुपर्नेछ। साथै सहभागीहरुले भिडियो सँगसँगै यी ह्यासट्यागहरु ह्याचखल्ती१०पर्सेन्टक्यासब्याक, ह्याच खल्तीक्यासब्याकच्यालेन्ज पनि क्याप्सनमा समावेश गर्नु पर्नेछ।
उक्त टिकटक प्रतियोगिता सम्बन्धमा सोसियल मिडिया तथा कन्टेन्ट मार्केटिङका वरिष्ठ अधिकारी रोनिका श्रेष्ठले भनिन्, ‘हामीले ग्राहकहरुको रिचार्ज कार्ड खरिद र स्क्र्याच गर्न पर्ने झन्झटलाई सहज गरी डिजिटल
रिचार्ज प्रोत्साहन गर्न र यसबारे सबैमा जानकारी दिने उद्देश्यले नेपालकै सबै भन्दा धेरै १० प्रतिशत क्यासब्याक अफरमा टिकटक च्यालेन्ज प्रतियोगिता सार्वजनिक गरेका हौँ। हामीलाई विश्वास छ, ग्राहकहरुलाइ डिजिटल भुक्तानी गर्न प्रोत्साहित गर्न यो कार्यक्रमले थप योगदान पुर्याउनेछ।’
Prevप्रहरी हवल्दार घुससहित प’क्राउ !
बेलायतमा फेरि बढ्यो को’रोना संक्र’मण